SU'AALAHA - Dongguan Vanhe Modular House Limited
Badeecadaha kala duwan waxay u dhigmaan qiimaha kala duwan, waxaan ku siin doonaa qiimaha ugu fiican, waxaan nahay warshadda dhabta ah.
Haa, waanu taageernaa adeegga muunada, iyo nidaamka ugu yar ayaa sidoo kale macquul ah.
Waqtiga bixinta alaabta caadiga ahi guud ahaan waa 7 maalmood gudahood, iyo alaabooyinka la habeeyay waxay u baahan yihiin qiyaastii 15 maalmood. Tirada alaabooyinka ayaa sidoo kale go'aamin doona waqtiga dhalmada.
1 sano, haddii ay dhibaatadeena tahay, waxaan ku badali karnaa qaybaha si bilaash ah. Dammaanad ama maya, waa dhaqanka shirkadeena inay wax ka qabato oo ay xalliso dhammaan arrimaha macaamiisha si qof walba ugu qanco
Haa, had iyo jeer waxaan isticmaalnaa baakadaha dhoofinta ee tayada sare leh, nidaamka oo dhan waxaa loo qaadi doonaa macaamilka.
Qiimaha dhoofintu waxay kuxirantahay habka aad dooratay inaad alaabta ku hesho. Express sida caadiga ah waa habka ugu dhaqsaha badan laakiin sidoo kale ugu qaalisan. Markab xamuulku waa xalka ugu fiican ee qaddarka badan. Si sax ah sicirka xamuulka waxaan ku siin karnaa oo keliya haddii aan ogaanno faahfaahinta xaddiga, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.